Asalnimada phenix - Afrikhepri Fondation
Xidhiidhka aan soo jeedino inta u dhaxaysa dabka iyo weelka nw waxaa xaqiijiyay image ah Benu, Phoenix ee dhaqanka Griiga, astaanta dabka iyo dib u dhalashada, oo magiciisu dhab ahaantii ku qoran yahay fargaha nw sida lagu cadeeyay higaada. Sawirka Benou wuxuu muhiim u yahay fahamka banaanbaxyada Osiris (Wsir) Heliopolis. Gorgorka, mid ka mid ah dibadbaxyada Benou ee Kemet, ayaa la sheegaa inuu yahay dib u eegista aquila qaabka dheer; latin avis “Bird” waxay bixisaa xididka Indo-Yurub *auei "Shimbiraha biyaha" oo ku xidhan aqua halkan auca "Goose" Akula "Eagle". Waxaan farta ku fiiqaynaa in goose iyo gorgorku yihiin shimbiro laxiriira Benooni, sawirka goose waxaa loo isticmaalaa higaadda kaas oo loo adeegsado naqshadeynta Benou.
Sankofa: "Qalbigu wuxuu dul saaray ololka ololka leh" Image of daa'in. Afrika kama jiro wax sheeko ah, taas oo soo jeedinaysa in Sankofa asal ahaan loola jeedo goose ama shimbiro, shimbiraha isku reerka ah sida dabbaasha (anatidae). Sanca waa astaanta Aphrodite, taasi waxaa loola jeedaa Venus. Kemet, Benou wuxuu xiriir la leeyahay meeraha Venus.
Goose sidoo kale waa mid ka mid ah shimbiraha matalaya Sankofa ee dhaqanka Akan. Wadnaha waxaa lagu dhejiyay faashad kaas oo loola jeedo Sankofa waa tusaale ku saabsan qalbiga Osiris (Wsir) oo la xiriirta Benou (wuxuu noqon doonaa kan xurmaysanwadnaha ee dhaqanka Masiixiga). Plutarch ayaa hore u tilmaamay: Masriyiintu waxay ku muujinayaan halkaas (macbudyada) isha iyo usha Osiris, sayidkooda iyo boqorkaba (…) Cirka, oo aan da 'ahayn, maadaama ay weligeed sii jirto, waxaa metelay qalbi saarna olol kulul"(Heshiiska Isis iyo Osiris, para. 10).
Phoenix: Shimbiraha Benou wuxuu matalaa hydrogen ku dhashay biyaha hore iyo xabaalku waa muuqaal kaarboon. Hydrogen iyo kaarboon waxay ku wada jiraan dhammaan qaybaha dabiiciga ah ee jira. Aamoon wuxuu ka dhashay ukunta uu dhigay Benou. Hydrogen-ka waa astaamaha ugu weyn ee qorraxda, xiddigta maalinta. Masaajidka hore waxaa loo yaqaannaa benben. Waa qaybta isbeddelan ee hydrogen-ka taas oo siin doonta matalaysa shimbirta.
Sawirka Benou runtii waa mid inoo saamaxaya inaan fahamno macnaha ay afrikaanka qadiimka ah u siisay nwn, oo isaga ku wareegsanaan doona nw. Xaqiiqdii, weelka nw waa in lala xiriiriyaa alaabta hydrogen, markaa xiriirka lala leeyahay nwn la fahamsan yahay a badda badda hoose. Ereyga hydrogen waa la jebiyey sida soo socota: hydro- "Eau"; hiddo-"dhali". Sida laga soo xigtay falsafadan, hydrogen waxa uu ku jiraa halbeeg ka soo baxa biyaha, laga soo qaaday biyaha. Suugaanta wuxuu siinayaa Lavoisier inuu ku "abuuray" ereyga hydrogenHase yeeshee, waa wax iska cad in aan halkan wax ka qabanno aqoonta cosmogta ee dooxada Nile iyo gaar ahaan qaansiirka Iounou.
Hydrogen waa qaybta aasaasiga ah ee qorraxda, xiddigta maalintaas ka dhalatay biyo, taas oo ah in la yidhaahdo laga soo qaaday biyahasida falsafadda ee ereyga "hydrogen". Hidrogen waa halbeegga ugu yar ee ugu yar, tan ugu mihiimsan adduunka. Dhulka, ilkuhu waa biyaha, taas oo caddaynaysa xiriirka u dhexeeya Benou iyo biyaha in aan ka hadli doono. Hydrogen waa qaybta ugu muhiimsan ee dhammaan arrimaha nolosha, oo la xidhiidha kaarboonka dhammaan qaybaha dabiiciga ah. Tani waa meesha aan ka helno badhida caadiga ah ee xisaabta masruufka, muusigga oo wax ku ool ah sawirka dhuxusha.
Qorshaha Iounou wuxuu yiri: " Chou iyo Tefnout waxay lahaayeen laba caruur ah Geb, dhulka iyo Nout, cirka. Geb wuxuu saaray ukun weyn kaasoo shimbiraha Benou (Phoenix) kasoo ifbaxday. Waaberigii hore, shimbiraha Benou waxay dul duuleen biyaha, iyagoo aamusnaanaya iyagoo hawada ku duulaya baalasheeda waaweyn, oo jiidaya lugaha dhaadheer gadaashiisa. Shimbiruhu waxay gaadheen Ahraamta dhagaxyada, kuwaas oo si yar uga soo muuqday dusha sare ee biyaha. Afkiisii ​​ayuu furmay, oo cod weyn buu qayliyey. Codku wuxuu ka dhawaajiyay meelkastoo badda aan dhamaadka lahayn, isagoo jabinaya aamusnaan weligeed ah. Markii, markii ugu horreysay, iftiinka waaberiga uu ka dhex muuqday gudcurka, ayaa dunidu si lama filaan ah uga buuxsantay aqoonta waxa habboon inay tahay iyo inaysan ahayn.
Kaarboon (tuulo asal ah) oo la xidhiidha hydrogen (benou) wuxuu noqonayaa sawirada cimilada, markaa fikradda qiiqa ka soo baxa dambaska (carbon). Ash ayaa la yiri bombi ee Kikongo, sharka bumbi iyo wanaagga bumbote; Tani waa cayaarta ereyada ku saabsan geeska Bantu umba taas oo caddaynaysa macnaha sheekada Iimou's cosmogony: "Markii, markii ugu horreysay, iftiinka waaberiga uu ka dhex muuqday gudcurka, ayaa dunidu si lama filaan ah uga buuxsantay aqoonta waxa habboon inay tahay iyo inaysan ahayn.si kale loo dhigo, sidoo (waa maxay bumbote) Oo Malaakii (taas oo aan ahaynbumbi). Muuqaalka biyaha ah ee Geb oo sheekadani ku saabsantahay waxaa lagu xaqiijin karaa sawirka Sobek, mid ka mid ah muujinta cibaadada ee Kom Ombo. on Terrexasuuso, hydrogen waxaa soo saaray biyo. Claude Traunecker ayaa ku soo laabtay xiriirka ka dhexeeya Geb iyo Sobek: " ee Kom Ombo, Geb iyo Sobek ay aad isugu dhow yihiin. Sobek, Eebaha element biyaha, iyo Geb, sayidkaygiiyow, oo ka mid ah dhulka iyo waxa ku jira, labaduba waa baryo chthonic kuwaas oo soo baxa dalalka bacriminta. Meel ka mid ah koollooyinka qoraallada Sobek ayaa ah qaab rabbaani ah kala sooc laga bilaabo gudaha Geb ee sirta ". J. Yoyotte xusay in fiqiga ombite Sobek si cad waa garan kuwa Fayum iyo ay milmaan goor tahay. Fikraddan, Geb wuxuu qabtaa hawlaha la xiriira biyaha. Tusaale ahaan waa abuuraha Nuun, iyo sida, waxa laga yaabaa inay qaadato qaab Yaxaas (HM) oo ka mid ahaa ayo Nuun, Geb, ilaahyada, yaxaaska (HM) Xurmaysan (OOGALIDDA), Yaxaasyada Yaxaas aabbihiis (hm hmw). Sidaa daraadeed, Geb wuxuu qaadan karaa khatar kufilan "(Coptos, p.352).
Osiris (Wsir), loo yaqaan Ina Geb qoraallada laydhka ah ee dooxada Nile, ayaa sidoo kale la xidhiidha biyaha. Mid ka mid ah noocyada dambe ee ilaahku waxa uu qirayaa: waxay ku saabsan tahayHydreios: "weli waa lagama maarmaan in la kala saaro dhaleeceynta Masaarida mid ka mid ah qaababka Hellenized ee ilaahyada Osiris, godka Hydreios, xusuusin Mr. Malaise. Magacani wuxuu ku dhow yahay ereyga hydreion taasoo tilmaamaysa a yar yaryar si loo xakameeyo inuu biyo quduus ah loo baahan yahay si libations.C'est xilli ay isticmaalaan Plutarch (De Iside, 36) iyo Clement ee Alexandria (Ström., 4, 37, I) inuu magacaabo weelka qaadeen by Nebi socodka isdhexgalka. Waxaan ka heli sawir ah in gargaarka ah ee Vatican, halkaas oo qof ceshadka israac lagu qabtay ka dhanka xabadka, sida qoraalka reer Iskanderiya ahaa, dheri ah in si sax ah ay ku beegan tahay sharaxaad ka siiyey by Apuleius ( Metam, XI, II, 3-4) kuwaas oo u arkaa sida sawirka la filan karo ee ilaahnimada jannadataasoo macnaha guud u ah Osiris. Hydreios sidaas darteed waa shakhsi ahaaneed ee weelkan loogu talagalay inuu helo biyo macaan, oo mabda'a ka imanaya Niil, iyo ka soo burqashada Osiris (...) (Shuruudaha dhexgalka iyo kala-jiidashada Masaarida Masaarida ee Talyaaniga, p. 307).
Xiriirka aan udhexeyno ee u dhexeeya Benou (hydrogen) iyo Butte (carbon) ayaa xaqiijiyay cilmi baaris. Hydrogen waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee tamarta. Hal kiilo oo hydrogen ah ayaa ku jirta seddex jeer oo ka badan tamar ka badan kiilogaraam saliid ah, oo gubashaduna waxay dhalinaysaa oo keliya uumiga biyaha; laga soo bilaabo biyaha, hydrogen ayaa laga heli karaa xaddiga aan xadidnayn. Hidrogen iyo kaarbaadku waa xaaladda iftiinka: " afar saameynood oo waaweyn waxay ka qayb qaadataa wax soo saarka iftiinka: 1) gubista degdega ah ee hydrogen-ka kooban ee hydrogen. 2) Gubashada hydrogen ayaa laga jaray inta badan kaararkeeda iyada oo saameyn ku leh heerkul sare. 3) Isku-darka kaarboonka ayaa laga jaray isku-darka la leh hydrogen. 4) Kululaynta dhuxul bilaash ah oo ka timid heerkulka gaduudka illaa midab casaan-cad " (Baaqa Sayniska Cusub, p. 164). Waa hormuudka ah hydrogen sida elementka kiimikada ee ugu badan ee Universe kaas oo taageersan mabda'a nww (Noun), Biyaha sarreeya, maxaa yeelay hydrogen wuxuu ka dhashay biyaha.
Waxaan leenahay ereyga Phenix ee Giriiga bounόs, naftiisa oo ka yimid Negro-Masaarida bnw(Banu). Xaqiiqdii, bnw > bounόs > Phoenix (B> ph); bounόs macneheedu waa "buur", "jaanis", "terminal". Sida aan aragno ugu dhakhsaha badan, benben oo lagu dhisay falkan isku mid ah Wbn "Shiine", "aqrisanin", "dhashay" ka dhigan tahay in "oo sarraysa dhulka" "terminal" gudbiyo in a bnw. Ereyga "butte" oo loola jeedo booska saxda ah ee uu Benou soo degay waa codka kala duwan ee ereyga "laakiin"Ama"xumad":" Dhamaadka "," erey "," terminal "oo la sheegay horos Giriig (dahab = gundhig); horos "Kulan" "buur". Waxaan ku xidhiidhineynaa erayga caanka ah ee Giriigga ah ee sawirka Hathor (Hoosta Hr) Horus (Hr), Sidaa awgeed xiriirka dhow ee u dhaxeeya Benou iyo meeraha Venus (Venus = Aphrodite = Hoosta Hr).
Ereyga kale ee loo isticmaalo in lagu magacaabo hoolka asaasiga ah waa "tuuli"Laga bilaabo Laatiin termitem ku saleysan limes, limitis "Boundary", "terminal", tuulo ". Laatiin limen wuxuu leeyahay macnaha marinkii waxayna bixisaa xag-jirnimada sharciga taas oo macnaheedu yahay "liquefy", "baabi'inayo", "ka dhigi dareere ah", "dhalaali", shaqo by soda loo isticmaalo eedayn ah dhaqan aan calaamadee marinka, soohdinta, xuduudda (marca ee Laatiinka) ee safarka shaqada.
Ku saabsan hareeraha, Claude Traunecker wuxuu yiri: Marka loo eego nambarka qoraalka 25, waxaanu ku jirnaa inaanu aragno bnw magac dhulka qiraysaa baxaya biyihii, buuxnaanta timi fowdo, roundness kordhin celisa kubada unorganized arrinta, ukun hore, arrinta qiraysaa nolosha u balaadhan oo barara riixaya fowdo. Tarjumadayada tuuli qayb ahaan waxay ka tarjumaysaa dhammaan fikradaha ku jira ereygan adag ee turjumidda"(Koptos, p.152). "Wixii Baines, sida uu qoray wargayska Traunecker, macnaha asaasiga ah bn wuu baxayaa, faafaa, barar, faafaa. Qoraalkani wuxuu si fudud u arki karaa dareen galmo asaasi ah"(Idem, p.152). Xidhiidhka uu Baines ku tilmaamay Traunecker waa arrin la xiriirta xadka aan la leenahay Negro-Masaarida bn in aan ka helno benben at ewondo èbόn "Gowrac" "faashad", "hoose" iyo "Wolof" ben-ben "Godka" (Diop: 1967). ah benben waa betyl oo ah qaabka "pyramidal" ay tilmaameyso Mount of Venus, xannibaadda matalaysa xubnaha taranka dumarka. Xiriirkani, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ina tusayaa qaabka ugu caansan ee xididkan umba / umbo taas oo keeneysa tusaale ahaan basaâ MEW "Vagina", bambara Mbye "Gudniinka", waxaanu xooga saarnaa in lagu gudbo kicongo funi "Vagina" waxay u dhigantaa ewondo èbόn (f> b)iyo Negro-Masaarida bn, foomka bilowga ah asal ahaan dhammaan ereyadan. Hal gacan, falka Wbn "In la dhasho" waxay u oggolaaneysaa inay xoojiso fahamkan, iyo dhinaca kale Bantu citOmbo "Vagina" (kailuba) wuxuu xiriir toos ah la leeyahay Laatiin umbo in aan ka helno omphalos (B> ph), dhagax Xurmaysan caabuday by dhaqan Giriigga, wax dhagax madow in maanta loo hubiyo iyada oo caabuddaan Muslim. Laatiin tumba oo tababaraya Faransiis xabaashii ou xabaashii xagga Giriigta Tumbos taasoo la micno ah tumulus waxay u dhigantaa sawirka siilkaof dalool, laga bilaabo dhaqanka dadka madow.
Tani waxay suurtogal u tahay sharraxaadda xayiraadda xabaalaha Osiris iyo kan dambe ee nebiyadii diimaha Ibraahim. Tumal  waa sawirka geesiga qaran ee dhaqanka basaâ € ™, tani waa wax la yaab leh Phoenix, xadka, shirarka, terminaalka,Horus(Hr), kan ugu sarreeya cirka.
 Asalka macquulka ah ee erayga tumulus aasaasay asalka Tumeo "U baro" Giriiga Tumbos "Dhicis".
Sidee loo toosiyaa ruux ahaan
Ujeeddada Quruumaha: Alice Bailey (PDF)